IMIGOMO JIKELELE NEMIBANDELA YESIVUMELWANO SOKUSETSHENZISWA: WONKE amakhasimende KUFANELE abe neminyaka okungenani engu-18 ubudala ukuthenga imikhiqizo yethu.
SICELA UFUNDE FUTHI UBUYE UBUYE UBUYEKEze IMIGOMO NEZIMO EZILANDELAYO ZOKUSETSHENZISWA KWESIVUMELWANO NGOKUQINISEKILE NGAPHAMBI KOKUSEBENZISA LELI WEBHU NEZINHLANGANO EZIHLANGANISIWE.
Ngokusebenzisa le webhusayithi, uyavumelana Nemigomo Nemibandela Yokusebenzisa Isivumelwano. Uma ungavumi, sicela uphume futhi unganaki imininingwane equkethwe lapha.
www.sikunodoli.co.uk unelungelo lokushintsha imigomo nemibandela yesivumelwano sokusebenzisa, iphelele noma ingxenye, nganoma isiphi isikhathi ngaphandle kokukwazisa ngaphambilini. Ngakho-ke, kufanele njalo ubuyekeze leli khasi ngaphambi kokusebenzisa le Webhusayithi kanye noma nezinsizakalo ukuze uqinisekise ukuthi uyayiqonda imigomo ovunyelwe ukufinyelela ngaphansi kwayo.
Ukusebenzisa kwakho iwebsite yethu ngaphandle kokuthi kuchazwe ngenye indlela, ukusebenzisa kwakho le webhusayithi kubuswa Yimigomo Nemibandela Yokusebenzisa Isivumelwano kanye ne-Inqubomgomo Yobumfihlo yewebhusayithi, efakwe lapha yile nkomba. Ekusebenziseni le webhusayithi, unqatshelwe ukuguqula, ukusabalalisa, ukuthumela, ukukhiqiza kabusha, ukushicilela, ukunika amalayisense, ukudlulisa noma ukuthengisa noma yiluphi ulwazi, imikhiqizo noma izinsizakalo ezitholwe noma ezibukwe kule webhusayithi. Kodwa-ke, ungabonisa, ulande noma uprinte amakhophi aqinile wanoma yikuphi okuqukethwe kule webhusayithi ukuze uzisebenzisele wena siqu, okungekhona okokuthengisa inqobo nje uma ungakushintshi okuqukethwe noma ususe noma iyiphi i-copyright, uphawu lokuhweba noma esinye isaziso sokuphathelene. Okunye ukusetshenziswa kolwazi oluqukethwe kule webhusayithi akuvunyelwe ngaphandle kwemvume ebhaliwe.
Ukusetshenziswa kolwazi olunikezwa yile webhusayithi, ngenkathi kuwusizo, akumele kusetshenziswe esikhundleni sezeluleko zabeluleki bakho. Imininingwane etholakala kule webhusayithi ayihloselwe ukuthi isetshenziselwe ukuthola noma isiphi isimo sezempilo noma isifo. Imikhiqizo ekule webhusayithi ithengiselwa izinhloso zocwaningo kuphela. www.sikunodoli.co.uk unelungelo lokulungisa noma yikuphi ukunganembi noma amaphutha wokubhala emininingwaneni ethunyelwe kule webhusayithi, futhi ngeke abe nesibopho samaphutha anjalo. Imininingwane ingashintshwa noma ivuselelwe ngaphandle kwesaziso futhi amanani entengo nokutholakala kwezimpahla nezinsizakalo kungashintsha ngaphandle kwesaziso.
Ukunganikeli nganoma yisiphi iseluleko.
Okuqukethwe kwenzelwe ulwazi kuphela futhi akuhloselwe ukukunikeza izeluleko ezithile, futhi akufanele kuthenjelwe kukho ngalokho. Akufanele wenze noma uthembele kokuqukethwe ngaphandle kokufuna izeluleko zochwepheshe.
IMIKHIQIZO ETHENGISWA KULE WEBSAYITHI YINHLOSO YOKUCWANINGA KUPHELA.
Ngalokhu uyavuma ukuvikela futhi ubambe www.sikunodoli.co.uk, kanye nezinsizakalo zethu, abaxhumana nathi, abaphathi, abaqondisi, ama-co-branders, ophathina kanye nabasebenzi abangenabungozi kunoma yisiphi isimangalo noma ukufunwa, kufaka phakathi nemali ekhokhelwa ngummeli eyenziwe yinoma yimuphi umuntu wesithathu ngenxa noma evela ekusebenziseni kwakho okuqukethwe kule webhusayithi , noma noma yikuphi okuqukethwe okuthumelayo, okuthumelayo, noma okudlulisa ngale webhusayithi, ukusebenzisa kwakho le webhusayithi, ukuxhumana kwakho nale webhusayithi, ukwephula kwakho le Migomo Nemibandela Yesivumelwano Sokusetshenziswa, noma ukwephulwa kwakho kwanoma imaphi amalungelo omunye umuntu.
UKUXHUMANA / I-SOFTWARE.
Izixhumanisi ezisuka noma eziya kumawebhusayithi angaphandle kwale webhusayithi zenzelwe ukusebenziseka kalula kuphela. www.sikunodoli.co.uk ayibuyekezi, ayivumeli, ayivumeli noma ilawule, futhi ayinabo obhekene nanoma yimaphi amasayithi axhumene nale webhusayithi noma okuqukethwe yilawo masayithi, abantu besithathu ababhalwe kuyo, noma imikhiqizo noma amasevisi abo. Ukuxhumanisa nanoma iyiphi enye indawo kusengcupheni yakho futhi www.sikunodoli.co.uk ngeke abe nesibopho noma abhekane nanoma imuphi umonakalo ngokuxhumanisa nokuxhumanisa. www.sikunodoli.co.uk futhi iyazikhipha zonke iziqinisekiso, ivezwe futhi ishiwo ngokunemba, ukuba semthethweni nokuba semthethweni kwanoma iziphi izinto noma imininingwane etholakala kulezo zingosi. Izixhumanisi eziya kumasayithi wesoftware alandelwe ukuzenzela lula futhi www.sikunodoli.co.uk akanacala noma ubophezelekile kunoma ibuphi ubunzima noma imiphumela ehambisana nokulanda isoftware. Ukusetshenziswa kwanoma iyiphi isoftware elandiwe kulawulwa yimigomo yesivumelwano selayisense, uma ikhona, ehambisana noma enikezwa isoftware.
UKUTHOLAKALA KWESAYITHI YETHU
Le webhusayithi itholakala kubasebenzisi amahora angamashumi amabili nane (24) ngosuku, izinsuku eziyisikhombisa (7) ngesonto, izinsuku ezingamakhulu amathathu namashumi ayisithupha nanhlanu (365) ngonyaka. Noma kunjalo, www.sikunodoli.co.uk igcina ilungelo lokwenza iwebhusayithi yethu ingatholakali nganoma yisiphi isikhathi, nganoma yisiphi isizathu, nanganoma yisiphi ubude besikhathi. Ngokusebenzisa le webhusayithi uyavuma lokho www.sikunodoli.co.uk ngeke abhekane nanoma yimuphi umonakalo ovelayo noma ohlobene nokuphazamiseka okunjalo, ukumiswa, noma ukunqanyulwa kwale webhusayithi kanye / noma izinsizakalo noma imikhiqizo equkethwe kuyo. Ngemuva kokwamukelwa kwale migomo nemibandela yokusetshenziswa www.sikunodoli.co.uk ikugunyaza ukuthi ubuke okuqukethwe okukuwebhusayithi kuphela ukuze uzisebenzisele wena. Okuqukethwe kwiwebhusayithi kuhloselwe kuphela abantu ababuza ngakho www.sikunodoli.co.uk Imikhiqizo noma izinsizakalo. Uma ungafinyeleli kuwebhusayithi ngezinhloso ezinjalo, manje usungayisebenzisa iwebhusayithi. Ngokuqinisekile, ukusetshenziswa kwabantu okungebona abantu noma ama-ejenti, abameli noma abamele abantu okungebona abantu akuvunyelwe.
Imininingwane oyinikeza yona.
www.sikunodoli.co.uk noma ukuqoqwa kwethu kanye / noma ukusebenzisa noma yiluphi ulwazi olunikezayo ngenkathi usebenzisa noma uvakashela le webhusayithi kubuswa ngu www.sikunodoli.co.uk Inqubomgomo Yobumfihlo kanye Nemigomo Nemibandela Yesivumelwano Sokusetshenziswa. Ngokusebenzisa le webhusayithi usinikeza amalungelo aqukethwe kuyo. Ekusebenziseni le webhusayithi awunakulayisha, usabalalise noma ushicilele ngale ndlela kunoma iyiphi imininingwane engabukwa njengeyihlazo, ehlambalazayo, enenkululeko, esongelayo, ehlukumeza, engekho emthethweni, ukuhlaselwa kwamalungelo obumfihlo noma okunye okungathandeki noma okungakha noma ukukhuthaze ukwephulwa komthetho yanoma yimuphi umthetho. Ngaphandle kwalolo lwazi olukhonjwa ngawodwana oluqoqwe kuwe ngokuya ngenqubomgomo yethu yobumfihlo, konke ukuphawula, ukuphawula, iziphakamiso, imibono noma olunye ulwazi oludlulisiwe kuzoba impahla ekhethekile ye www.sikunodoli.co.uk futhi unikeza www.sikunodoli.co.uk ilayisense elingenabukhosi, elingapheliyo, elingenakuguqulwa, lomhlaba wonke, elingeyona eyokusebenzisa noma yokuzikhiqiza ngokufanayo. www.sikunodoli.co.uk ukhululekile ukukopisha, ukudalula, ukusabalalisa noma ukuhlaziya noma yiluphi ulwazi olunjalo nganoma yiziphi izinhloso futhi akuhloselwe nakancane ukukukhokhela nganoma yiluphi lolo lwazi.
www.sikunodoli.co.uk inikeza okuqukethwe kule webhusayithi njengesevisi kuwe, khasimende lethu. Le webhusayithi ayikwazi futhi ayinayo imininingwane emayelana nazo zonke izinhlelo zokusebenza zemikhiqizo ethengisiwe. Kungenzeka ingaqukathi lonke ulwazi olusebenza ezimeni zakho noma ukusetshenziswa kwakho kwemikhiqizo ethengisiwe. Okuqukethwe yile webhusayithi, iseva yewebhusayithi eyenza kutholakale, nezinsizakalo nemikhiqizo www.sikunodoli.co.uk ihlinzeka kule webhusayithi, inikezwa ngesisekelo "njengoba sinjalo" futhi "njengoba sitholakala" ngaphandle kwewaranti yanoma yiluphi uhlobo, noma ngabe iyavezwa, ishiwo noma isemthethweni. www.sikunodoli.co.uk ichaza ngokusobala isikweletu sokwehluleka kwezobuchwepheshe (kufaka phakathi i-hardware noma ukwehluleka kwesoftware), ukuthunyelwa kwekhompyutha okungaphelele, okucasuliwe noma okubambezelekile, kanye / noma ukunganembi kwezobuchwepheshe, kanye nokufinyelela okungagunyaziwe kokuthunyelwa komsebenzisi ngabantu besithathu. Ngaphezu kwalokho, www.sikunodoli.co.uk akumele noma akuqinisekisi ukuthi awekho amagciwane noma ezinye izinto ezingcolisayo noma ezonakalisayo ezizodluliswa, noma ukuthi akukho monakalo ozovela ohlelweni lwekhompyutha yakho. Unesibopho sedwa sokuvikela okwanele nokulondolozwa kwedatha kanye / noma okokusebenza nokuthatha zonke izindlela zokuthwebula ukuskena amagciwane ekhompyutha noma ezinye izinto ezilimazayo. Ngokusebenzisa kwakho le webhusayithi, uyavuma ukuthi ukusetshenziswa okunjalo kungengcuphe yakho kuphela, kufaka phakathi umthwalo wazo zonke izindleko ezihambisana nakho konke ukwesekwa okudingekayo noma ukulungiswa kwanoma iyiphi impahla oyisebenzisayo maqondana nale webhusayithi. Kuwo wonke amandla angavinjelwe ngumthetho osebenzayo www.sikunodoli.co.uk, abeluleki babo bezokwelapha, abahlinzeki, ababonisi, abaqondisi kanye nabasebenzi bayazikhipha futhi bazikhiphe zonke iziqinisekiso maqondana nakho konke okuqukethwe, okuveziwe, okushiwo noma okusemthethweni. Lesi sitatimende sokuzikhipha emthwalweni sifaka, kepha asikhawulwanga, kunoma yimaphi amawaranti noma ukuthengiseka, ukufaneleka ngenhloso ethile, nokungaphuli umthetho. www.sikunodoli.co.uk ayiqinisekisi ukuthi okuqukethwe kunembile, kuphelele noma kungokwamanje. www.sikunodoli.co.uk Akuqinisekisi ukuthi le webhusayithi izosebenza ngaphandle kwephutha, ukuthi amaphutha azolungiswa noma ukuthi le webhusayithi noma isiphakeli sewebhusayithi eyenza itholakale ayinamagciwane noma ezinye izinto eziyingozi. Okuqukethwe kwentengo nokutholakala, kanye nokunye okuqukethwe okuqukethwe kule webhusayithi noma okutholakala lapho, kungashintsha ngaphandle kwesaziso. uyavuma futhi uyavuma Ngaphambi kokusebenzisa noma yimuphi umkhiqizo kufanele uqinisekise noma yiluphi ulwazi olubalulekile kuwe kupakethe yomkhiqizo. Uthatha umthwalo ngokunemba,
Ngaphambi kokusebenzisa noma yimuphi umkhiqizo kufanele uqinisekise noma yiluphi ulwazi olubalulekile kuwe kupakethe yomkhiqizo. Uthatha isibopho sokunemba, ukufaneleka nokufaneleka kwanoma yiluphi ulwazi olunikezayo www.sikunodoli.co.uk. njengokucatshangelwa okuncane kokufinyelela kwakho kule webhusayithi nokusebenzisa okuqukethwe kwayo, uyavuma lokho www.sikunodoli.co.uk ayinacala kuwe nganoma iyiphi indlela nganoma yiziphi izinqumo ongazenza noma izenzo zakho noma okungezona izenzo zakho ezincike kokuqukethwe. uyavuma futhi ukuthi isikweletu esihlanganisiwe se- www.sikunodoli.co.uk okuvela noma okuhlobene nokusebenzisa kwakho nokufinyelela kwakho kungakhathalekile indlela yokwenza noma isimangalo (isibonelo, inkontileka, iwaranti, ukuhlukumeza, ubudedengu, isikweletu esiqinile, ukungasebenzi kahle kobuchwepheshe, ukukhwabanisa, noma ezinye izisekelo zezimangalo), kukhawulelwe entengo yokuthenga yanoma yiziphi izinto othenge kuzo www.sikunodoli.co.uk entengweni esebenzayo.www.sikunodoli.co.uk ngeke nakancane abhekane nanoma ikuphi ukulimala okuqondile, okungaqondile, okukhethekile, okwenzeka, okulandelanayo, noma kokujeziswa noma ngabe www.sikunodoli.co.uk welulekwe ngamathuba omonakalo onjalo. Lokhu umkhawulo ophelele wesikweletu osebenza kukho konke ukulahlekelwa nomonakalo wanoma yiluphi uhlobo. Uma unganelisekile ngale webhusayithi noma ngokuqukethwe kwayo (kufaka phakathi imigomo yokusetshenziswa), ikhambi lakho elilodwa kuphela ukuyeka ukusebenzisa le webhusayithi. Ngoba ezinye iziphathimandla azikuvumeli ukubekelwa eceleni noma ukukhawulelwa kwesikweletu sokonakala okuvela noma okulandelwayo, lowo mkhawulo ungahle ungasebenzi kuwe.
IMIKHIQIZO ESINIKEZELA NGAYO ihloselwe UKUSETSHENZISWA KWESICWANGCISO SOKUSEBENZA KUPHELA.
Ekuthengeni noma iyiphi yalezi zinto, ikhasimende liyavuma ukuthi kunezingozi ezihilelekile ekusetshenzisweni noma ekusatshalalisweni kwale mikhiqizo. Lawa makhemikhali AKAhloselwe ukuwasebenzisa njengezithasiselo zokudla, izidakamizwa, izimonyo, amakhemikhali asendlini noma ezinye izinhlelo ezingafanele. Ukufakwa kuhlu kwento kuleli sayithi akuyona ilayisense yokusetshenziswa kwayo ukwephula noma yiliphi ilungelo lobunikazi. Yonke imikhiqizo izophathwa kuphela ngochwepheshe abaqeqeshiwe nabaqeqeshwe kahle. Wonke amakhasimende amele futhi aqinisekisa ukuthi ngokubukeza kwabo nokutadisha ukuthi bazi ngokuphelele futhi banolwazi ngokulandelayo: Imithetho kaHulumeni maqondana nokusetshenziswa nokuchayeka kuyo yonke imikhiqizo. Izingozi zezempilo nezokuphepha ezihambisana nokuphathwa kwemikhiqizo abayithengayo. Isidingo sokuxwayisa ngokwanele ngezingozi zezempilo nezokuphepha ezihambisana nanoma yimiphi imikhiqizo. www.sikunodoli.co.uk unelungelo lokukhawulela kanye / noma ukwenqaba ukuthengiswa kwemikhiqizo kunoma yibaphi abantu abangafanelekile uma sinesizathu sokukholelwa ukuthi ukusetshenziswa kabi kuzokwenzeka.
www.sikunodoli.co.uk imikhiqizo yenzelwe izinhloso zocwaningo lwelabhoratri kuphela futhi ngaphandle uma kuchazwe ngenye indlela akufanele isetshenziselwe noma yiziphi ezinye izinhloso, kufaka phakathi kepha kungagcini ngenhloso yokuxilonga i-vitro, ezidakamizweni zokudla, kumadivayisi wezokwelapha, noma ezimonyo kubantu noma ezilwaneni noma ngezinjongo zokuhweba. Umthengi uyavuma ukuthi imikhiqizo ayifakwanga inzalo noma ihlolwe yi www.sikunodoli.co.uk ukuphepha nokusebenza ngokudla, izidakamizwa, idivayisi yezokwelapha, izimonyo, ezentengiso noma okunye ukusetshenziswa.
Umthengi umele ngokusobala futhi uqinisekisa ukuthi www.sikunodoli.co.uk umthengi azohlola ngokufanele, asebenzise, ​​akhiqize futhi athengise noma yimiphi imikhiqizo ethengwe kuyo www.sikunodoli.co.uk kanye / noma izinto ezenziwe ngemikhiqizo ethengwe ku www.sikunodoli.co.uk ngokuhambisana nemikhuba yomuntu onokwethenjelwa onolwazi emkhakheni futhi ngokuhambisana ngokuqinile nayo yonke imithetho nezimiso ezisebenzayo, manje nakamuva okuzokwenziwa. Umthengi uqhubeka nokugunyaza ukuthi noma yikuphi okhiqizwe nomkhiqizo ngeke kudunyiswe noma kuhanjiswe kabi ngaphakathi kwencazelo yomthetho iFederal Food, Drug, and Cosmetic Act futhi ngeke kube izinto ezingekho ngaphansi kweSigaba 404, 505, noma 512 soMthetho. , ingeniswe kwezentengiselwano zakwamanye amazwe. Umthengi uyakubona lokho, kusukela www.sikunodoli.co.uk imikhiqizo, ngaphandle kwalapho kuchazwe ngenye indlela, ihloselwe izinjongo zocwaningo kuphela, kungenzeka zingabi sohlwini lwe-Toxic Substances Control Act (TSCA). Umthengi uthatha umthwalo wokuqinisekisa ukuthi imikhiqizo ethengwe ku- www.sikunodoli.co.uk zivunyelwe ukusetshenziswa ngaphansi kwe-TSCA, uma kudingeka.
Umthengi unesibopho sokuqinisekisa ubungozi nokwenza olunye ucwaningo oludingekayo ukuze afunde izingozi ezibandakanyekile ekusebenziseni imikhiqizo ethengwe www.sikunodoli.co.uk. Ayikho imikhiqizo ethengiwe kusuka ku- www.sikunodoli.co.uk ngaphandle kwalapho kubekiwe, kuzothathwa njengokudla, izidakamizwa, okokusebenza kwezokwelapha noma izimonyo. YONKE imikhiqizo nezinsizakalo ezinikezwayo kwenzelwa IZINHLOSO ZOKUCWANINGA KUPHELA. NGEKE ngaphansi kwezimo AKUKHO noma yini okufanele isetshenziselwe izinhloso zokuzijabulisa noma ukusetshenziswa kwabantu. futhi i-www.provenpeptides.com AYIBOPHO icala nganoma yimuphi umonakalo ongabangelwa ubudedengu, ukuhlukunyezwa, noma YILUPHI olunye udaba olungalindelekile.
UKUSETSHENZISWA KANYE NEZIMISELO.
Ekuthengeni le mikhiqizo, ikhasimende liyavuma ukuthi kunezingozi ezihambisana nokusetshenziswa kwazo. Ikhasimende limele futhi lisiqinisekisa ukuthi kusukela ekubuyekezweni okuzimele nasekufundweni kwekhasimende bazi kahle futhi banolwazi mayelana:
(Mina). Izingozi zezempilo nezokuphepha ezihambisana nokuphathwa kwemikhiqizo ethengiwe;
(II). Ukulawulwa kwenhlanzeko yezimboni kuyadingeka ukuvikela abasebenzi bayo ezingozini ezinjalo zezempilo nezokuphepha;
(III). Isidingo sokuxwayisa ngokwanele ngezingozi zezempilo nezokuphepha ezihambisana nemikhiqizo; futhi
(IV). Imithethonqubo kaHulumeni, maqondana nokusetshenziswa nokuvezwa kwemikhiqizo enjalo. Sinelungelo lokukhawulela ukuthengiswa kwemikhiqizo noma ukungathengisi imikhiqizo kumakhasimende angafanelekile.
Noma iziphi izimpendulo ezenziwa nge-imeyili noma ngokuthumela maqondana nesilwane sakho / isilwane sami futhi ngisebenzisa mina / mina / okwami ​​/ wena kanye nawe noma okwakho kubhekisa KISIMPULA ZESITIMU nezifundo zokuhlola. Izimpendulo zethu AZISIKISI ukusetshenziswa komuntu futhi-ke, ungenzi lutho olungekho emthethweni nganoma yini ekule webhusayithi.
Umthengi uqinisekisa ukuthi axhumene nelabhorethri, isikhungo, inyuvesi noma enye indawo esekwe ocwaningweni evumela ukuthengwa nokusetshenziswa kwemikhiqizo ethengiswa www.sikunodoli.co.uk, ngezinjongo zocwaningo kuphela. Ngaphezu kwalokho, uma noma ngubani engathenga kusuka ku- www.sikunodoli.co.uk lokho akuzange kuthiwe ukusebenzisana, bazobe benza isenzo sokukhwabanisa abangabekwa icala ngaso.www.sikunodoli.co.uk uyaligodla ilungelo lokuhlola ngokucophelela ulwazi olunikeziwe ukuze ahlole ukuthi alunembile yini. www.sikunodoli.co.uk ngokubona kwayo kuphela, kungadinga ukuqinisekiswa okwengeziwe kokuzibandakanya ngaphambi kokugcwaliseka kwe-oda.
Le Migomo Nemibandela nanoma yimiphi imigomo efakiwe noma ebhekiswe kuyo yakha sonke isivumelwano esiphakathi www.sikunodoli.co.uk futhi maqondana nokusebenzisa kwakho le Webhusayithi nodaba oludingidwayo lapha, futhi uthatha isikhundla sokuqonda noma kwezivumelwano zangaphambili (kungaba nge-elektroniki, ngomlomo noma ngokubhaliwe) maqondana nodaba, futhi angeke zichitshiyelwe noma ziguqulwe ngaphandle kokubhaliwe, noma www.sikunodoli.co.uk ukwenza izichibiyelo ezinjalo noma ukuguqulwa ngokuya ngale Migomo Nemibandela Yesivumelwano Sokusetshenziswa.
Uma noma iyiphi ingxenye yale Migomo Nemibandela Yesivumelwano Sokusetshenziswa ithathwa noma inqunywa ukuthi ngeke iphoqeleke, leyo ngxenye izosuswa noma ikhawulelwe ezingeni eliphansi elidingekayo. Okusele kwale Migomo Nemibandela Yesivumelwano Sokusetshenziswa, kufaka phakathi noma iyiphi ingxenye ebukeziwe, kuzohlala kusebenza ngokugcwele. Le Migomo Nemibandela Yokusebenzisa Isivumelwano yiyo yonke isivumelwano esiphakathi kwethu esilawula ukusebenzisa kwakho le Webhusayithi.
Izihloko eziqukethwe yilesi Sivumelwano Nemigomo Nemibandela Yokusetshenziswa kanye Nenqubomgomo Yobumfihlo YeSayithi Lewebhu kungokwesikhombo kuphela.
www.sikunodoli.co.uk ngeke ibe nesibopho sokulibaziseka noma ukwehluleka kokusebenza okubangelwe yizimo ezingaphezu kwamandla ayo, kufaka phakathi, ngaphandle komkhawulo, ukubambezeleka ngenxa yoku-oda emuva kwemikhiqizo eceliwe, ukubambezeleka kweposi, ukubambezeleka kwamasiko noma ukuthunyelwa okulahlekile.www.sikunodoli.co.uk ngeke abe nesibopho sokwazisa iKhasimende uma kwenzeka kubambezeleka okunjalo. IKhasimende lizoba nesibopho sokwenza kuphela amanye amalungiselelo okuthenga eminye imikhiqizo nezinye izindleko ezitholwe maqondana nalokhu kuthenga.
Ngaphandle kokuthi kunikezwe ngokusobala "kwisaziso somthetho" esithile kule Sayithi, le Migomo Nemibandela yakha isivumelwano sonke phakathi kwakho naleli Sayithi maqondana nokusetshenziswa kwaleli Sayithi, nokuqukethwe. Ngokuchofoza okuthi "Ngiyavuma" lapho ufaka i-oda lakho, uyavumelana Nenqubomgomo yethu Yokuthumela Nokubuyisa Imali.
Sinikeza imininingwane ephathelene nokusetshenziswa komuntu njenge umhlahlandlela oyinkomba wabacwaningi ozohlaziywa nokusiza izivivinyo zaselebhu.
Le mikhiqizo ayithengiswa ukuze isetshenziswe ngabantu, futhi sizokhansela noma yimaphi ama-oda esingawasola ngokuwasebenzisela le njongo.
Wonke amakhasimende kufanele aqinisekise ukuthi noma imaphi amakhemikhali a-odwa kithina asemthethweni ezweni lawo.
Amakhasimende ase-UK kufanele aqaphele ukuthi njengamanje ama-SARMS akuyona into elawulwayo ngaphansi kwe- Ukusetshenziswa Kakubi Komthetho Wezidakamizwa ngo-1971 or Umthetho Wezinto Ze-Psychoactive 2016
Uyacelwa ukuthi ungathengisi kabusha noma yiziphi izinto ezithengwe kule webhusayithi ukuze zisetshenziswe ngabantu, ngoba lokhu bekungaba okungekho emthethweni ngaphansi kwe Imithi Act 1968
Asemukeli sibopho sanoma yiziphi izehlakalo ezihlobene nokusetshenziswa kwabantu, kungagcini kulokhu: Ukulimala, ukufa, ukukhubazeka, ukucindezelwa, ukulahleka kwezezimali
Lewebhusayithi isebenza yi www.sikunodoli.co.uk. Kuwo wonke amasayithi, amagama athi "thina", "thina" kanye no "wethu" abhekise kwiSarms Store. ISarms Store inikeza le webhusayithi, kufaka phakathi yonke imininingwane, amathuluzi kanye nezinsizakalo ezitholakala kule sayithi kuwe, umsebenzisi, okunemibandela yokwamukela kwakho yonke imibandela, imibandela, izinqubomgomo nezaziso ezichazwe lapha.
Akunasimo lapho iSarms Store, abaqondisi bethu, izikhulu zethu, abasebenzi bethu, abaxhumana nabo, abenzeli, osonkontileka, abaqeqeshelwa umsebenzi, abahlinzeki, abahlinzeka ngemisebenzi noma abanikezeli bamalayisense bezothweswa icala nganoma yikuphi ukulimala, ukulahleka, isimangalo, noma yikuphi okuqondile, okungaqondile, okuhambisana nesijeziso, okukhethekile, noma ukulimala okulandelanayo kwanoma yiluphi uhlobo, kufaka phakathi, ngaphandle komkhawulo wenzuzo elahlekile, imali elahlekile, ukonga okulahlekile, ukulahleka kwedatha, izindleko zokubuyiselwa, noma yimuphi umonakalo ofanayo, noma ngabe kusekelwe kwinkontileka, ukuhlukunyezwa (kufaka phakathi ubudedengu), isikweletu esiqinile noma okunye, okuvela ukusebenzisa kwakho noma iyiphi insizakalo noma noma imiphi imikhiqizo oyitholile usebenzisa insiza, noma nganoma isiphi esinye isimangalo esihlobene nganoma iyiphi indlela ekusebenziseni kwakho insizakalo noma yimuphi umkhiqizo, kufaka phakathi, kodwa kungagcini lapho, noma imaphi amaphutha noma ukweqiwa kunoma yikuphi okuqukethwe, noma noma ikuphi ukulahleka noma ukulimala kwanoma yiluphi uhlobo olwenziwe ngenxa yokusetshenziswa kwensizakalo noma noma yikuphi okuqukethwe (noma umkhiqizo) okuthunyelwe, okudlulisiwe, noma okunye okutholakala ngale nsizakalo, noma ngabe welulekisiwe ngokungenzeka kwakho. Ngoba ezinye izifundazwe noma iziphathimandla azikuvumeli ukukhishwa noma umkhawulo wesikweletu ngokulimala okulandelanayo noma okuthe nhlo, kulawo mazwe noma ezindaweni ezithile, isikweletu sethu sizokhawulelwa ezingeni eliphakeme elivunyelwe umthetho.
Uyavuma ukuvikela, uvikele futhi ubambe iSarms Store engenabungozi kanye nomzali wethu, izinkampani ezingaphansi kwethu, abaxhumana nathi, ophathina bethu, izikhulu, abaqondisi, amanxusa, osonkontileka, abanikeli bamalayisense, abanikezeli bezinsizakalo, osonkontileka abancane, abahlinzeki, abaqeqeshwayo nabasebenzi, abangenabungozi kunoma yisiphi isimangalo noma isidingo, kufaka phakathi izimali zabameli ezifanele, ezenziwe yinoma yimuphi umuntu wesithathu ngenxa noma ngenxa yokuhlukumeza kwakho le Migomo Yesevisi noma amadokhumenti abawafaka ngereferensi, noma ukwephula kwakho noma yimuphi umthetho noma amalungelo ovela eceleni.
Le Migomo Yesevisi nanoma yiziphi izivumelwano ezihlukile lapho sikunikeza khona Izinsizakalo ziyolawulwa futhi zenziwe ngokuhambisana nemithetho yase-United Kingdom.
Imibuzo mayelana neMigomo Yesevisi kufanele ithunyelwe kithi ku- sales@sarmsstore.co.uk